अब मदिरा सेवन गरी कार्यालय आउने र बहुबिबाह गर्ने कर्मचारीको सिधै जागीर चट, यस्तो बन्दैछ कानुन ? लालबाबु पण्डित – Todays Nepal
अब मदिरा सेवन गरी कार्यालय आउने र बहुबिबाह गर्ने कर्मचारीको सिधै जागीर चट, यस्तो बन्दैछ कानुन ? लालबाबु पण्डित
कर्मचारीले बहुविवाह गरेमा वा मदिरासेवन गरी पटकपटक कार्यालय आएमा त्यस्ता कर्मचारी बर्खास्त हुने प्रवाधान राख्दै सरकारले संघीय निजामति सेवा ऐन २०७५ को मस्यौदा गरेको छ ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले तयार गरेको सो ऐनको मस्यौदामा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले छलफल अघि बढाएको छ ।
मन्त्रालयअन्र्तगत संघीय तथा कानुन् शाखाले चार दिनअघिदेखि छलफल प्रारम्भ गरेको मन्त्रालय स्रोतको भनाई छ ।, यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा छ,
करिव ५ महिनाअघि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सो मस्यौदा तयार गरेको थियो ।
मस्यौद भएको ५ महिनासम्म यस विषयमा कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको थिएन। ‘प्रक्रिया अघि बढाउने बेला सरकार परिवर्तन भयो र नयाँ सरकारले सो विधेकका बारेमा चासो राखेन’ स्रोतले भन्यो। नयाँ सरकार गठनपछि विधेकका बारेमा पुनः छलफल आरम्भ भएको स्रोतको भनाइ छ।
दिपिकाको अंगालोको बेरिएका नेपाली युवा प्रबल गुरुङ को हुन् ?
नेपाली मुलका युवा प्रबल गुरुङ बलिउड अभिनेत्रि दीपिका पादुकोणको अंगालोमा देखा परेका छन् । अमेरिकामा रहेर फेसन डिजाइनरको काम गर्दै आएका प्रबल गुरुङ दीपिकाको अंगालोमा देखा परेका हुन् ।
उनले दीपिकासँगको सेल्फी समाजिक सञ्जालमा सेयर समेत गरेका छन् । अमेरिकाको न्युयोर्कमा भएको मेट गाला फेसन सोको क्रममा उनले दीपिकासँग सेल्फी सेयर गरेका हुन् ।
उनै प्रबल गुरुङको डिजाइनमा दीपिका सहित बलिउड र हलीउडका आठ जना अभिनेत्री तथा मोडलहरु रेड कार्पेटमा उत्रिएका थिए । दीपिकासँगै हलीउड र बलीउडका प्रेरणादायी महिलाहरुसँग काम गर्न पाउँदा निकै खुसी लागेको उनले बताएका छन् ।
उनीहरुसँग काम गर्न पाउँदा आफु निकै उत्साहीत भएको उनको भनाइ छ । ‘मैले तयार पारेको पहिरणमा उहाँहरु सुन्दरताका साथ प्रस्तुत हुनुभयो ।’ उनले भने, ‘म धेरै खुसी छु ।’ प्रबल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै ख्याती कमाएका फेसन डिजाइनर हुन् ।
मोदी बिरुद्ध कडा अभिब्यक्ति दिएर भाईरल हुने को हुन् यी युवा ? यस्तो छ सबै बिवरण